Ukukhethwa okuhle kakhulu kwamanoveli wentsha
Ukubuyekezwa kwamanoveli wentsha
Izincwadi ezi-3 eziphezulu zikaJay Asher
Mhlawumbe ilebuli "Umuntu omdala osemncane" iyizaba zokubalekela noma ikuphi ukubekeka mayelana nencwadi egxile kakhulu kubantu abadala kunasebantwini abasha. Iqiniso ukuthi ababhali balolu hlobo bayanda eminyakeni yamuva ngempumelelo enkulu, behlanganisa izindaba zothando nephuzu eliphakathi phakathi ...
Izincwadi ezi-3 eziphezulu zikaJames Dashner
Izincwadi zentsha zithanda ukuhlukaniswa phakathi kwezinhlobo zothando (inguqulo yentsha) nefantasy noma inganekwane yesayensi. Uyazi, imboni yokushicilela iyalela ukuthi icabange ukuthi iyazi ukuthi izoshaya kuphi ngokuqinisekile phakathi kwabafundi bokuqala. Yize futhi, ukulunga, singathola olunye uhlobo lwe ...
Izincwadi ezi-3 ezinhle kakhulu zeBlue Jeans
Uma kukhona umbhali wemibhalo yentsha evele ngamandla eminyakeni yamuva eSpain, yiBlue Jeans. UFrancisco de Paula Fernández usebenzisa ngempumelelo igama elingumbombayi elisha nelisikisela izilaleli zakhe ezisakhula. Ukusondela kubafundi abaneminyaka ephakathi kuka-12 no-17 kungenziwa ...
Ilanga laphakathi kwamabili nguStephenie Meyer
Kwathi lapho kubonakala sengathi uStephenie Meyer uqondiswe kabusha kweminye imizabalazo yezincwadi, kusikhiye senoveli yobugebengu, kanye nenkululeko obekucatshangwa ngayo maqondana ne-saga yantambama, ezenzakalweni zezinsizwa ezisencane kanye nokulunywa kwabo inkanuko ngephunga likagalikhi nobuphakade, ekugcineni bekungeke kube njalo. Ngoba uMeyer ...
Ummese Esandleni, kaPatrick Ness
Indaba kaT Todd Hewitt, elandiswe kule noveli, iyipharadayim yomuntu mayelana nemvelo yakhe. Yimvelo yamanje yomphakathi wethu kuphela ephathwa njengenganekwane yesikhathi esizayo kule ndaba. Ukuthatha umbono okushiwo yizinganekwane zesayensi njengezaba zokuthi ...
Riquete one pompadour, we Amélie Nothomb
Olunye lwezimpaphe zamanje ezimangalisa kakhulu Amélie Nothomb. Inoveli yakhe yangaphambilini eyashicilelwa eSpain, ubugebengu buka-Count Neville, yasithatha yasifaka enovelini yabaseshi eyodwa enomklamo osethi, lapho itholwe nguTim Burton, izogcina iphenduke ifilimu, kanye nengxenye enkulu yokukhiqizwa kwakhe kwangaphambilini. Kodwa ku…
Awusiyo inhlobo yami, evela kuChloe Santana
Kunesikhathi lapho uthando kungaba ukuzijabulisa okuncane. Ungahle ukholelwe ukuthi uyayilawula, kepha umzuzu wokuthandana ungenambuyiselo uhlala uphela. Ngaphandle… lapho izinto zigcina zingahambi kahle, umangele ngenxa yokukhungatheka. Thatha ngehlaya. Ngibe nawe ...
Mahhala nguPatrick Ness
Ukubhekana nezinkinga ezithile zenhlalo kusuka ekulandiseni kwentsha kuyadingeka maqondana nalokho kwaziswa nokwenziwa kwemvelo okuhlukile mayelana nokuzimela kwabantu. Futhi ngithi "kuphoqelekile" ngoba kusezinkathini zobusha lapho kusethwe khona amaphethini walokho esizoba ebudaleni. Intsha iyavezwa ...
Isishiyagalombili, nguRebeca Stones
Ukuze sibhale inoveli ephelele, kuzofanele sithole ibhalansi yemilingo engenziwa ngumsebenzi ojikelezayo. Kungabe kufanelekile ukunxephezela ukwedelela, ubudlova kanye nemizwa yentsha yombhali noma yombhali, ngezizathu, ubungcweti kanye nokuqonda komlobi osekhulile. FUTHI…
A Thousand Times Forever, kaJohn Green
Inoveli yamanje yentsha inikeza ukufundwa okuningi okugxile ezinhlotsheni ezahlukahlukene. Kukhona impilo engaphezu kwezindaba zothando (okungafanele ukuthi zibe yiphutha, konke okushiwoyo), kepha ababhali abafuna i-niche yabo phakathi kwezithameli ezincane bahlala babelana ngombono owodwa: umfutho. Ukuzidela okukhulu, uthando lwezothando ...
Osisi. I-Infinite Ties, ebhalwe ngu-Anna Todd
Imimoya eguquguqukayo yezelamani yinto engapheli ukusimangaza thina esingabazali. Kepha ngaphandle kokuhlaziywa kwangaphandle kwengqondo, le ncwadi Sisters Lazos Infinitos ikhuluma ngokuxhumana phakathi kwezelamani, kulokhu phakathi kwabaphikisi abane bendaba: ...